AKHRISO+CADEYN: Madaxtooyada Somalia oo ka diidan xeerkii lagu ceyriyey DP WORLD, dagaal culusna ku qaaday baarlamaanka Faderaalka, Maxaase kadhalan kara? | PUNTLANDTIMES KA DHIGO WEHEL AKHRISO+CADEYN: Madaxtooyada Somalia oo ka diidan xeerkii lagu ceyriyey DP WORLD, dagaal culusna ku qaaday baarlamaanka Faderaalka, Maxaase kadhalan kara? – PUNTLANDTIMES KA DHIGO WEHEL
Home W.Gudaha AKHRISO+CADEYN: Madaxtooyada Somalia oo ka diidan xeerkii lagu ceyriyey DP WORLD, dagaal culusna ku qaaday baarlamaanka Faderaalka, Maxaase kadhalan kara?
AKHRISO+CADEYN: Madaxtooyada Somalia oo ka diidan xeerkii lagu ceyriyey DP WORLD, dagaal culusna ku qaaday baarlamaanka Faderaalka, Maxaase kadhalan kara?
MUQDISHO(P-TIMES)- Warsidaha Puntlandtimes wuxuu goor sii horeysay baahiyey in aan xalay laga seexan Madaxtooyada Soomaaliya oo goor hore bilowday abaabulka Mooshin ka dhan ah guddoonka baarlamaanka, gaar ahaana Prof Maxamed Sh Cismaan Jawaari oo baarlamaanka horgeeyey qaraarkii shirkada DP WORLD looga saarayey Soomaaliya.
Raysalwasaaraha Soomaaliya iyo Madaxweynaha ayaa la rumeysan yahay in aysan ilaa hadda ka hadlin go’aankii lagu ceyriyey DP WORLD, waxayna dareemeen culeys weyn oo siyaasadeed, kaas oo u arkeen mid dhib ku ah joogitaankooda.
Mr, Xasan Cali Kheyre wuxuu xalay bilaabay dagaalkii ugu adkaa, isagoo xaafiiskiisa kula kulmay in ka badan 50 Xildhibaan oo ay ka wada hadleen in daaqada laga saaro Gudoomiyahooda Jawaari si looga badbaado arrimaha Imaaraatka Carabta.
Xildhibaan Axmed Macalin Fiqi oo katirsan baarlamaanka Faderaalka ayaa sheegay in duulaanka lagu soo qaaday baarlamaanka iyo qaraarkii ay gaareen maalmo kahor ee DP WORLD looga cayriyey dalka ay ku muteysteen in lagu abuuro daganaansho la’aan baaxad weyn.